Ukulandelelana - Inkcazo kwiBhajethi yeSithili
Ukusetyenziswa kweeNkcitho zeMali ezenzekelayo
I-term sequestration isetyenziselwa ukuchaza ukuchithwa kwemali efunekayo kwi-budget federal. Ukufunwa komsebenzi kuyindlela esetyenziswayo xa iindleko zokusebenza urhulumente zidlula ngaphezu kwexabiso okanye ingeniso engenayo ezayo ngexesha lonyaka-mali. Kuye kubekho imizekelo emininzi yokulandelelana kwimbali yaseMelika.
Ukubeka nje, ukulandelwa kwemisebenzi yinto yokusebenza ngokuzenzekelayo, ukuchitha imali kwi-board-cut-cut-cuts to cut down the deficits .
I-sequeter yakutshanje yabekwa yiNgqungquthela yoMthetho woLawulo loHlahlo lwabiwo-mali ka-2011 kwaye yaqalisa ukusebenza ngo-2013. Umceli we-2013 wanciphisa i-$ 1.2 trillion kwimali engaphezu kweminyaka engama-9.
I-Congressional Research Service ichaza ukulandelelana ngale ndlela:
Ngokubanzi, ukulandelwa kwezinto kubandakanya ukucinywa ngokusisigxina kwezibonelelo zebhajethi ngokwepesenti efananayo. Ngaphezulu, le niselo yokunciphisa ipesenti iyasetyenziswa kuzo zonke iiprojekti, iiprojekthi kunye nemisebenzi kwi-akhawunti yebhajethi. ezinjalo iinkqubo, ukubonelela ngokukhululeka kunye nemithetho ekhethekileyo.
Iingcamango zokumisela ukuchithwa kwemali ngokuzenzekelayo kwi-budget yezemali zaqala ukufakwa ngoHlomelo oluHloniphekileyo kunye noMthetho oLawulekileyo wokuLawula u-1985.
Umceli ukhulula kakhulu, kwaye uphumelele. "Ngaloo ndlela ithemba lokutshatyalaliswa kwezinto libonakala lincinci kangangokuba iCongress kude kube yilapho ingafuni ukuba kwenzeke ukuba kwenzeke," uprofesa wezenzululwazi wezepolitiki wase-Auburn uPaul M. Johnson wabhala.
Imizekelo yamanqaku okuThatyathwa
I-sequeter yakutshanje yakasetyenziswe kuMthetho woLawulo loHlahlo lwabiwo-mali ka-2011 ukukhuthaza iCongress ukunciphisa ukulahleka kwe-$ 1.2 trillion ngasekupheleni kuka-2012.
Xa abameli behlulekile ukwenza njalo, umthetho wawubangela ukuchithwa kwesabelomali ngokuzenzekelayo kuhlahlo lwabiwo-mali lwesizwe-mali ka-2013.
Iqela elikhethekileyo leqela elenziwe ngamalungu angama-12 e-US House of Representatives kunye ne-Senate yase-US yanyulwa ngo-2011 ukuchonga iindlela zokunciphisa ityala likazwelonke nge-$ 1.2 trillion ngaphezu kweminyaka eyi-10. I-Congress enkulu yahluleka ukufikelela kwisivumelwano, nangona kunjalo.
Abanye abenzi bomthetho abaye baqalisa ukusetyenziswa kwe-sequeter njengendlela yokunciphisa ubunqongophala kamva babonisa ukukhathazeka kwiiprogram ezijongene nokuchithwa kwemali.
Umlomo uSomlomo uJohn Boehner, umzekelo, wayexhasa uMthetho woLawulo loHlahlo lwabiwo-mali ka-2011 kodwa wabuyela emva ngo-2012, esithi ukutyunjwa kubonisa "ingozi enkulu kwizokhuseleko lwethu kazwelonke kwaye kufuneka ithathe indawo."
UMongameli uBarack Obama naye uyakhathazeka ngamazwi malunga nokuthungathwa kwabasebenzi baseMerika kunye noqoqosho. "Ukuchithwa kwesabelomali ngokuzenzekelayo - eyaziwayo njengomgcini-mhlaba-usongela amawaka emisebenzi yemisebenzi, kwaye unqumle iinkonzo ezibalulekileyo kubantwana, abadala, abantu abaneengqondo ngengqondo kunye namadoda namabhinqa ethu ngendlela efanayo," kusho uB Obama. "Ezi zicucu ziza kunzima ukwandisa uqoqosho lwethu kwaye zenze imisebenzi ngokuchaphazela amandla ethu okufaka imali ephambili kwimimandla efana nemfundo, uphando kunye nokutsha, ukukhuselwa koluntu kunye nokulungela impi."
Ukufunyaniswa kwakhona kuya kwenzeka phantsi kwe-Pay As You Go Act ka-2010, kunye nezinye izinto. Ngaphantsi kwaloo mthetho urhulumente wesigqeba kufuneka aqhubeke nokuhlawula ukuKhuseleko loLuntu, ukungaqeshwa kwabasebenzi kunye neenzuzo zezilwanyana, kunye neenzuzo eziphantsi-mali ezinjengeMedicaid, izitampu zokutya kunye neNkxaso yeNkxaso yoKhuseleko .
Noko ke, i-Medicare ixhomekeka ngokuzenzekelayo phantsi kocwangco. Imali yayo ayikwazi ukuncitshiswa ngama-2 ekhulwini, nangona kunjalo.
Kwakhona ukukhululwa kwimivuzo yokunyusa i- congressal imivuzo .
Ubulili beeNtshonkco zaseFransi: Ukuphela kweMasculine kunye nomfazi